IPhone 3GS Hardware sy Software
IPhone & iPod Hevitra fototra
Notsongaina tamin'ny 8 Jona 2009
Navoaka: 19 Jona 2009
Notsongaina tamin'ny Jona 2010
Ny iPhone 3GS dia ny modely iPhone fahatelo nalefan'i Apple. Io dia nampiasa ny iPhone 3G ho toy ny fototra ary tsara-lanja ny singa sasantsasany rehefa manampy olon-kafa vitsivitsy. Fa angamba ny tena zava-dehibe dia ny 3GS no nametraka ny anarana sy ny famoahana Apple izay nampiasaina tamin'ny iPhone hatramin'ny taloha.
Tamin'ny famotsorana azy dia voalaza fa ny "S" amin'ny anaran'ny finday dia nijanona ho "haingana". Izany dia noho ny 3GS manana processor kokoa noho ny 3G, mitarika ny hampitombo ny fahombiazana araka ny Apple, ary koa ny fifandraisana haingam-pandeha maimaimpoana 3G.
Tao amin'ny kianja filalaovana media, ny 3GS iPhone dia nitifitra kamerà vaovao izay nirehareha tamin'ny 3-megapixel ary ny fahafahana manoratra horonantsary, izay vaovao amin'ny iPhone amin'ny fotoana. Ny finday koa dia nampidirina rindrambaiko tamin'ny alàlan'ny horonan-tsary . Ny iPhone 3GS dia nanatsara ny fiainan'ny pilina raha ampitahaina amin'ny 3G ary nampitombo avo roa heny ny fahaizan'ny mpamaky azy, ary nanolotra modely misy tahiry 16GB sy 32GB.
Ny 3GS sy ny iPhone Namana / Release Modèl
Ny lamina napetrak'i Apple tamin'ny famotsorana ireo modely misy iPhone dia efa miorina mafy: ny modely voalohany amin'ny taranaka vaovao dia manana tarehimarika vaovao amin'ny anarany, endrika vaovao (matetika) ary singa vaovao lehibe. Ny modely faharoa tamin'ity taranaka ity, navoaka ny taona manaraka, manampy ny "S" amin'ny anarany sy ny fanatanjahan-tena maoderina kokoa.
Ity lamina ity dia naseho vao haingana tamin'ny seho iPhone 6S , saingy nanomboka tamin'ny 3GS izany. Ny 3GS dia nampiasa azy io toy ny teo aloha teo aloha, saingy nanao fanatsarana ambany ary ny iPhone no voalohany nampiasa ny anarana hoe "S". Hatramin'io, Apple dia nanaraka ity lamin'ny fampiroboroboana ny iPhone, anarana sy ny famotsorana azy.
iPhone Features 3G
Mihoatra ny haavon-tsakafo haingana hatramin'ny avo roa heny
7.2 Mbps fifandraisana an-tariby 3G; haingana kokoa noho ny fifandraisana iPhone 3G
Mitombo ny haavon'ny tahiry
Kamerà 3-megapixel, miaraka amin'ny horonantsary fanoratana amin'ny 30 frames / faharoa
Better life for battery life
Fitaovana an-tariby iPhone toy ny fananganana tohana ho an'ny Nike +, Bluetooth, GPS natsangana, compass digital, sns.
iPhone Features 3GS
Raki- peo amin'ny alàlan'ny horonantsary , amin'ny fahafahana mizara video amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, mailaka, ary YouTube
Fanohanana App Store
Voafetra Voice Control izay mamela ny mpampiasa manao antso ary mifehy ny iTunes amin'ny feo; Ny telefaona koa dia afaka miresaka izay hira tiany
Fandraisana malalaka mifototra amin'ny votoatin'ny fitenenana
Ny fanohanana iOS 3.0 (mifanaraka amin'ny iOS 6, saingy miaraka amin'ny endri-javatra voafetra)
5 ora 3G
12 ora 2G
9 ora mampiasa Internet Wi-Fi
Horonam-peo 10 ora eo ho eo
30 ora horonam-peo
300 ora eo ho eo
4.5 inches tall x 2.4 wide x 0.48 deep
Fananganana krizin'ny iPhone 3GS
Tahaka ny tamin'ny alohany, ny mpitsikera tamin'ny ankapobeny dia azon'ny mpitsikera tsara indrindra:
Nomeko ny kintana 3GS 4.5 aho ary niteny hoe "ny iPhone 3GS no iPhone tsara indrindra hatramin'izay ... Raha tsy mpampiasa iPhone ianao, dia io no antony tena mandresy lahatra mbola mila mifindra."
CNET dia nanome ny kintany efatra, saingy somary nihenjana kokoa tamin'ny fiderana azy: "Efa ampy ny masontsika, fa tsy ampy mba hahatonga antsika hientanentanana tanteraka."
Ny Macworld dia nanome ny 3GS ho kintana 4.5, milaza hoe "Apple dia mbola mitarika ny fonosana, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra marobe."
Nomarihan'ny PC Advisor ny fanavaozana 4.5-kintana ary nandrava "Computer compte tsara indrindra".
Nandritra ny vanim-potoana izay ny 3GS dia Apple's top-of-the-line iPhone, niparitaka ny varotra . Ny fifandraisan'i Apple mivantana ny iPhone rehetra hatramin'ny Janoary 2009 dia telefaona 17.3 tapitrisa. Tamin'ny fotoana nisoloan'ny 3GS ny iPhone 4 tamin'ny Jona 2010, Apple dia namidy iPhones maherin'ny 50 tapitrisa. Fitsapana 33 tapitrisa izany ao anatin'ny latsaky ny 18 volana.
Na dia zava-dehibe aza ny mahatakatra fa tsy ny fivarotana rehetra tamin'io fotoana io no avy amin'ny 3GS - ny 3G sy ny modelina taloha dia mbola namidy - tsara ny mihevitra fa ny ankamaroan'ny iPhones nividy nandritra io fotoana io dia ny 3GS.
Ny fomba famandrihana iPod efa voavaky miaraka amin'ny mozika efa nandefasana
Azo ampiasaina amin'ny fitaovana maro ve ny iPhone Apps?
Nanazava ny Features of the Hardware 5C Hardware
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny iTunes Match
Azo atao ve ny mijery virus virtoaly?
Ny solosaina izay mahatonga ny iPhone ho mora
5 antony mahatonga ny iPhone ho azo antoka kokoa noho ny Android
Fantaro hoe aiza no hividianana iTunes amin'ny 64-bit Windows
Manala ny garony ve ny fanakatonana na ny famoahana tranonkala?
Cave Story - Free Platform Game ho an'ny PC
Google Docs amin'ny Google Drive
Ahoana no Mamorona Folders amin'ny Gmail, Subfolders, ary Labels Naka
Manomboha tetikasa vaovao iMovie
9 Fitaovana lalao sy tsingerin-taona
Ahoana ny fomba hahazoana ny fialan-tsasatra fanombohan'ny Final Fantasy VII, ampahany 1
Ny fametahana ny Nintendo 3DS XL
Ahoana no hampitomboana ny endri-tsoratra ary hamoronana soratra lehibe kokoa amin'ny iPad
Ahoana ny fomba fampivoarana format amin'ny alàlan'ny fampiasana iTunes
The Godfather 2 Cheats, Codes, ary Secrets for PS3
Nomerao farafaharatsiny hatramin'ny 5 na 10 ao anatin'ny Excel
Araho ireo dingana tsotra ireo mba hanidiana ny kaonty Hotmail anao
Ahoana ny fanoratana ny Spotify
Torolalana ho an'ny Lalao simba tsara indrindra
Ahoana no fomba fitahirizam-bokin'ny fianakaviana sy hizarana ny votoatin'ny findainao rehetra?
Fitaovam-piadiana ara-pitaovana miaramila
Inona no atao hoe STA File?
Ahoana no hamahana USB mitondra fampiasa mampiasa Ubuntu
Top Apple iOS Apps ho an'ny Wireless Networking
Download Jack'd amin'ny Android Devices
Hamafiso ny Didy Oblivion Item Code ID